सरकारसँग आफूहरुलाई गोली ठोक्न निर्मला पन्तका बाबु आमाको आग्रह | My News Nepal
काठमाडौं । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तका बुवाआमाले न्यायका निम्ति सरकारलाई अनुरोध गरेका छन्। बलात्कारपछि हत्या गरिएकी पन्तका बाबुआमाले आज (बिहिबार) राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफूहरूलाई जसरी भए पनि न्याय दिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्।
सम्मेलनमा निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी पन्तले भनिन्–‘न्याय दिन नसक्ने भए हामी तपाईंहरूलाई न्याय दिलाउन सक्दैनौं, बरू मार्न चाहन्छौं भनिदिनुहोला । उनले न्याय दिन नसके गाली ठोकिदिन उनले आग्रह गरिन्।
उनले राष्ट्रपतिलाई पनि आफ्नो छोरी सम्झी न्याय दिलाउन अनुरोध गरिन्। ‘मेरी छोरीमात्रै नसम्झनु, आफ्नो छोरी सम्झनु, उसको ठाउँमा मेरो भए के हुन्थ्यो भन्ने सोचेर जसरी पनि न्याय दिलाउनु हुन्छ भनेर हामी यहाँ आएका हौं,’ उनले भनिन्।
त्यसैगरी आफ्नो छोरीको हत्या भएको घटनाबारे सुनाउने क्रममा पत्रकार सम्मेलनमै भावविह्वल भएका निर्मलाका बुवा यज्ञराज पन्तले रुँदै भने–‘छोरीको साइकल भेटिएपछि उसकी साथीकी दिदी बबिता बमले साइकल भेटिएको भए लाश पनि त्यतै होला कसरी भनिन् ? उसलाई कसरी थाहा भयो ? त्यति प्रमाण मिल्दामिल्दै पनि सरकारले उल्टै त्यसलाई स‌ंरक्षण गरिरहेको छ।’
उनीहरुले निर्मलाको शव दबावमा परेर जलाइएको बताएका छन् । शव जलाउन दबाव दिने डोटीका तीर्थराज भण्डारीको भूमिकामाथि सत्यतथ्य छानविन हुनुपर्ने निर्मलाका पिताले माग गरेका छन् । नाताले सालो पर्ने तीर्थराज भण्डारीले डोटीबाट कञ्चनपुर झरेर निर्मलाको शव जलाउन एसपी र सिडिओसँग मिलेर धम्कीपूर्ण दबाव दिएको भिनाजु यज्ञराजको गुनासो छ । ‘हामीले सत्यतथ्य बुझ्नुपर्छ, तीर्थराजले किन वीचमा आएर लास उठाउनलाई जोड गरेको छ ?’ छोरीका हत्यारालाई कारवाहीको माग गर्दै काठमाडौं आएका यज्ञराजले तीर्थराजका बारेमा पत्रकारसँग भने, ‘त्यो नेतागिरी गर्छ । त्यो अहिलेसम्म हामीलाई भेट्न आएको छैन । मैले फोन गर्दा आउँछु भन्यो, आएन । एक महिनासम्म फोन स्वीच्ड अफ भयो ।’
गत साउन ११ गते निर्मला पन्तको लाश उखुबारीमा मृत अवस्थामा फेला परेको थियो। ९ जना मानवअधिकारकर्मी, स्थानिय र अधिवक्ताको साथमा काठमाडौँ आएका निर्मलाका बाबुआमाले आज राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेका हुन् ।
निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या भएको ४९ दिन बितिसक्दासम्म सरकारले दोषी पत्ता लगाउन सकेको छैन । घटनाको अनुसन्धानको लागि ३–३ वटा समिति गठन गर्दा पनि निचोड निस्कन नसकेपछि प्रहरी तथा राज्य संयन्त्रमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।